nko ụdị shot ọgbụgba ọkụ igwe - China Qingdao Antai Arọ Industry
Qingdao ANTAI nko (Spinner hanga) ụdị gbara ọgbụgba ọkụ igwe na-bụ-eji maka Nta igwe, dị ka, Aluminium anwụ-mgbatị, Magnesium oge ọgbụgba, obere ígwè fabrications, rims / wiil, Kwadobe na nkà na ụzụ agwọ ọrịa. Medium/Large machines, such as, forges, foundries, steel structures, gears, heat treatments, electric transformers etc.
Qingdao ANTAI nko (Spinner hanga) ụdị gbara ọgbụgba ọkụ igwe na-bụ-eji maka Nta igwe: Aluminium anwụ-mgbatị, Magnesium oge ọgbụgba, obere ígwè fabrications, rims / wiil, Kwadobe na nkà na ụzụ agwọ ọrịa. Ọkara / Large igwe: forges, foundries, ígwè akụkụ, Kwadobe, okpomọkụ ọgwụgwọ, electric nkesa wdg
Qingdao ANTAI nko (Spinner hanga) pịnye gbara ọgbụgba ọkụ igwe na-e ọcha akụkụ nghọta si ihe efefe ebu na-eji oge ọgbụgba ma ọ bụ nnukwu akụkụ a na-apụghị tumbled. Anyị na-enye dị iche iche na aghụghọ tinyere eruba-site, Y-track, na-aga n'ihu ma ọ bụ na-akara gbawara aghụghọ. Ụfọdụ uru ka anyị aghụghọ na-agụnye: ala isi ụlọ chọrọ, ala mbụ ego, zuru gbawara mkpuchi enweghị emebiri akụkụ.
Qingdao ANTAI nko (Spinner hanga) pịnye gbara ọgbụgba ọkụ igwe na-nrụnye na arụmọrụ mgbanwe, adabara ọtụtụ ụdị nke na-arụ ọrụ. The nso nke ígwè ọrụ bụ sara mbara nke ukwuu, ya mere, ọ dị mfe iji chọpụta ndị kasị mma igwe ọ bụla mkpa. The arụ ọrụ ụkpụrụ bụ otu n'ime nghọta ọrụ-iberibe (singly ma ọ bụ ịgụnye). Nko na-agbaba, agbagharị n'ime igwe n'inwe niile elu nke na-arụ ọrụ iberibe na abrasive edinam si wiil, positioned na n'akụkụ nke n'ume ụlọ.
E wezụga na nke nke shot gbawara ulo, ndị ọrụ nke igwe ndị a bụ loading nke hooks.
Nka na ụzụ oke :
Size ọrụ ibe kpochara
Wheel otutu ikike
N'arọ / min
3D osise nke nko ụdị gbara ọgbụgba ọkụ igwe
Ọgbụgba ọkụ kabinet nkọwa
Ọgbụgba ọkụ n'ọnụ ụlọ na-ekpo ọkụ mpaghara na-eji 10mm ọkpụrụkpụ na-ekpo ọkụ akpọrepu ígwè efere Mn13 ọkwa ,ndị ọzọ na mpaghara na-echebe liner were 8mm ọkpụrụkpụ ọkwa 65Mn ígwè efere. Nkedo mkpụrụ ofu na liner.
Mapụtara akụkụ nke shot ọgbụgba ọkụ igwe
Anyị nwere ogologo imekọ ihe ọnụ ngwa factory, ọnụ ala price, ngwa ngwa nnyefe oge, ezigbo àgwà.
The nhicha arụmọrụ nke nko ụdị gbara ọgbụgba ọkụ igwe
Ọ bụla metal akụkụ nwere ike nhicha site nko ụdị gbara ọgbụgba ọkụ igwe
Dị ka, ibe ya bụrụ akụkụ, nēfe akụkụ, bogie, rims, wiil wdg
Nnyefe nke nko ụdị gbara ọgbụgba ọkụ igwe
Anyị factory oru nke nko ụdị gbara ọgbụgba ọkụ igwe
Anyị exported anyị shot ọgbụgba ọkụ igwe mba 30, dị ka, Russia, Indonesia, Australia, India wdg
Ọ bụrụ na ị gaa na anyị factory, ị nwere ike ịlele igwe na anyị ụlọ ọrụ ma na ndị ahịa nso site anyị ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na akụrụngwa bụ adabara gị workpiece, biko na-agwa anyị na-esonụ ozi:
326 Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Uwe mkpuchi akwa gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Uwe mkpuchi akwa Type Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Automatic efere Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Automatic Steel efere Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Ájị Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Ájị Type Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Continous ndepụta Ọwara Type ntupu-echebe Mmadụ Shot ọgbụgba ọkụ Machine N'ihi dara Parts
crawler Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Drum Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Drum Type Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Metal Uwe mkpuchi akwa gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Efere Shot ọgbụgba ọkụ Equipment
Efere Shot ọgbụgba ọkụ Machine Price
Qxy2500 Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Ala ebu gabiga Type Shot ọgbụgba ọkụ Machine N'ihi Ibé akwụkwọ / efere
Rolling Drum gbara ọgbụgba ọkụ Machine
gbara Blast Machine na Rubber echebe
Gbara ọgbụgba ọkụ Machine N'ihi Die Nkedo Parts
Gbara ọgbụgba ọkụ Machine N'ihi Steel efere
Gbara ọgbụgba ọkụ Machine N'ihi Waya mkpara
Gbara ọgbụgba ọkụ efere
Shotblasting Machine N'ihi Building Materials
Steel efere gbara Blast Machine
Steel efere gbara Blastin
Steel efere Shot ọgbụgba ọkụ na eserese Line
Steel efere gbara ọgbụgba ọkụ Equipment
Steel efere Shot ọgbụgba ọkụ Machine Machinery
Steel efere Shot ọgbụgba ọkụ sere Machine
Tumbling Rubber echebe gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Tumling Steel echebe gbara ọgbụgba ọkụ Machine